Iilọ nkwari akụ Hawaii: Nọmba 2021 dị ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa atọ mbụ nke 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Iilọ nkwari akụ Hawaii: Nọmba 2021 dị ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa atọ mbụ nke 2020 » Page 3
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ego ole ha nwetara na họtel site na nkeji iri na ise bụ $ 394.1 nde (-62.5%) ma e jiri ya tụnyere $ 1.05 ijeri na 2020. Onyinye ụlọ bụ 4.5 nde ụlọ abalị (-7.4%), na ụlọ chọrọ bụ 1.5 nde ụlọ abalị (-57.4%).
Tụnyere Top US Ahịa
N'iji ya tụnyere ahịa US kachasị elu n'oge nke mbụ, Hawaiian Islands nwetara nke atọ kachasị elu na RevPAR na $ 87 (-59.5%). Ebe ndị Florida na-eduga mba ahụ na Miami na-akọ akụkọ kachasị elu na RevPAR na $ 143 (-20.9%), na-esote Tampa na $ 89 (-14.9%).
Hawaii duuru ahịa US na ADR maka nkeji mbụ na $ 269 (-12.0%) na-esote Miami na $ 223 (-14.7%) na Tampa na $ 135 (-9.4%).
Site na US Mainland nwere ike ịnweta njem na njem ụgbọ elu dị mkpụmkpụ, ụgbọ mmiri nke mbụ nke Hawaiian Islands kwụsịrị ma e jiri ya tụnyere ahịa 25 kachasị elu nke STR; ọdịda na 23rd ntụpọ. Tampa, Florida rutere mba ahụ obibi na 68.5 pasent (-4.3 pasent isi), na-esote Miami, Florida na 64.2 pasent (-5.0 pasent isi), na Phoenix, Arizona na 59.4 percent (-8.4 pasent isi).
Tụnyere International Markets
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere mba "anyanwụ na oké osimiri" ebe, Maui County họọrọ nke abụọ maka nke mbụ nkeji iri na ise RevPAR na $ 157 (-50.3%). Hotels na Maldives họọrọ nke kachasị elu na RevPAR na $ 551 (+ 27.4%). Agwaetiti Hawaii, Oahu na Kauai gbara nke ise, iri, na iri na otu.
Ndị Maldives duuru na nkeji mbụ ADR na $ 909 (+ 28.9%), na French Polynesia ($ 510, + 5.5%) na Maui County ($ 457, -1.9%). Agwaetiti Hawaii, Kauai, na Oahu nọ na nke isii, nke itoolu, na nke iri. Ndi Maldives bukwa uzo mbu nke uzo mbu nke “anwu na oke osimiri” (60.6 percent, -0.7 percent), Puerto Rico sochiri (49.5 percent, -9.6 percent) na Cancun region (38.5 percent, -24.8 percent points) ). Agwaetiti Hawaii, Maui County, Oahu, na Kauai nọ na nke anọ, nke asaa, nke itoolu, na nke iri na otu.
Page 3 nke 3 Na Mbụ Osote
Qatar Airways sonyeere IATA’s Turbulence Aware Platform